Tuesday September 02, 2008 - 10:18:12
Kabtankii X.Qaranka Soomaaliya C/Qadir Gaduudoow oo ka dagay Talyaaniga.!!
Tuesday September 02, 2008 - 10:53:00
Sababta keeneeysa in dadku ay tahriibaan ayaa ah raadinta nolol dhaanta midda hadda ka jirta wadanka Somalia..
Imisa ciyaaryahan ayaa la kala iibsaday ilaa iyo hadda?
Tuesday September 02, 2008 - 10:59:47
Ciyaaryahankii hore ee kooxda Arsenal Jose Antonio Reyes ayaa ugu dambeeyay kala iibsiga iyo wada xaajoodka suuqa kala iibsiga ciyaartooyda..
Tuesday September 02, 2008 - 11:03:43
Cesc Fabregas ayaa tababaraha Arsenal Arsene Wenger u sheegay in taladiisa ku aadan soo iibinta ciyaartooyahan khadka dhexe ee difaaca uga ciyaaro Kooxda inuu la jecelyahay Xavi Alonso..
Xulka Under-17-ka oo qaxay
Wednesday July 29, 2009 - 10:03:49
Guddoomiye ku xigeenka GOS oo kormeeray xulka U-17-ka
Monday August 03, 2009 - 15:03:18
Guddoomiye ku xigeenka guddiga Olombikada Soomaaliyeed ee xiriirka caalamiga ah Duran Axmed Faarax ayaa Axdii booqasho ugu tagay xulka U-17-ka kubada cagta dalka Soomaaliya oo haatan tababar ku qaadanaya garoonka dugsiga sare ee booliska kadib markii ay kasoo qexeen stadium Banaadir.
W/Isboortiga & xiriirka k/cagta oo kulmay
Monday August 03, 2009 - 20:43:13
Mauuiyiinta xiriirka Soomaaliyeed ee kubada cagta ayaa maanta waxaa xafiiskiisa ay kulan kula yeesheen wasiirka isboortiga iyo dhalinyarada ee dowladda federalka Soomaaliya Suleymaan Colaad Rooble, waxaana labada dhinac ay islasoo qadeen arrimo badan oo xasaasi ah oo la xariira dhaq dhaqaaqyada kubada…
Tuesday August 04, 2009 - 17:29:05
Wasiirka dhalinyarada iyo Isboortiga dowladda federalka Soomaaliya Suleymaan Colaad Rooble ayaa saaka waabarigii booqasho dhiiri gelin ah ugu tagay xulka qaranka ee da'doodu ka hooseyso 17-ka sanadood oo haatan ku tababar qaadanaya dugsiga sare ee booliska kadib markii ay kasoo qexeen goobtoodii hore.
Caddaay oo lagu daray liiska Cayaartoyda heerka 1-aad ee Man City
Thursday August 20, 2009 - 17:30:34
Cayaaryahanka da'da yar ee Soomaaliyeed Cabdi Salaam Cabdul Qaadir Cadaay ayaa waxaa uu si rasmi ah ugasoo dhex muuqaday liiska cayaartoyda heerka 1-aad ee kooxda Manchester cityee dalka Ingriiska.
Xiriirka Kubada Cagta oo afur iyo Suxuur ugu deeqay dhalinyaro Soomaaliyeed.
Saturday August 22, 2009 - 20:10:29
Xiriirka Soomaaliyeed ee kubada Cagta ayaa afur iyo suxuur ugu deeqaqy dhalinyaro Soomaaliyeed oo ku haray xaafadaha laga kala qaxay ee ku dhow xarunta xiriirka ee ku taala Xaafada Geed Jacayl ee degmada Wardhiigley.
Wednesday March 24, 2010 - 10:01:31
Wednesday April 14, 2010 - 12:17:01
Friday April 16, 2010 - 11:44:50
Tuesday April 20, 2010 - 22:02:41
Xiriirka kubada cagta oo qabtay munaasabad lagusoo gabagabeynayay horyaalkii kubada cagta ee dhawaan dhamaaday.
Tuesday May 18, 2010 - 06:31:29
Xiriirka Soomaaliyeed ee kubada cagta ayaa maanta oo Isniin ah waxaa uu hotelka saxafi ee magaalada Muqdisho ku qabtay munaasabad aad u weyn oo lagu maamuusayay gabagabada horyaalkii kubada cagta dalka soomaaliya ee dhawaan idlaaday.
Macalin Soomaaliyeed oo wacdare ka dhigay tababar caalami ah oo ka dhacay dalka Jarmalka
Saturday May 22, 2010 - 12:07:43
Macalinka kooxda Beach soccer-ka Soomaaliyeed ee dalka Switzerland Axmed Maxamed Axmed (Gaab) ayaa wacdare weyn ka muujiyay tababar caalami ah oo ka dhacay dalka Jarmalka ayna ka qeyb galeen macalimiin si weyn caalamka looga yaqaano.
Cayaartodya xulka qaranka Soomaaliya ee da'doodu ka yartahay17-ka sano ayaa caawa 2-0 ugu awood sheegtay kooxda Al-Shaxaniya ee dalka Qadar intii ay socotay cayaar saaxiibtinimo oo ku dhex martay garoonka Kooxda Al-Shaxaniya ee magaalada Dooxa.
Xulka Da’yarta Soomaaliya iyo Kooxda Horyaalka Qadar oo is garab dhacay
Thursday September 02, 2010 - 14:48:03
Xulka kubada cagta dalka Soomaaliya ee da'doodu ka yartahay 17-ka sano ayaa xalay cayaartii labaad oo saaxiibtinimo la yeeshay kooxda heysata horyaalka dalka Qadar ee la yiraahdo Al-Gharafa FC, waxaana cayaartaasi ay ku dhamaatay bar bar dhac 1-1 ah.